Qoys reer Ciraaq ah oo diyaarad khaas ah ku tagay dalka Jarmalka iyaga oo iska dhigay diblomaasiyiin… – Hagaag.com
Posted on 13 Oktoobar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Qoys magangalyo doon ah oo reer Ciraaq ayaa adeegsaday diyaarad khaas ah si ay uga soo duulaan garoonka diyaaradaha ee Istanbul una gaaraan garoonka Munich ee dalka Jarmalka ka dib markii ay iska soo dhigeen sifo diblomaasiyiin Jimcihii la soo dhaafay. Tani ayaa waxa sameeyey qoys reer Ciraaq ah oo ka kooban 4 qof, aabbe (49 sano jir ah), hooyo (44 sano jir ah), iyo laba carruur ah oo da’doodu tahay 12 iyo 7 kala ah.
Wargeyska Jarmalka ee Süddeutsche Zeitung iyo warbaahinta kale ee maxalliga ah ayaa Isniintii qoray in mukhalasiinta ka caawiyay qoyskan inay Jarmalka gaaraan ayaa heleen qiyaastii lacag dhan 60,000 oo euro adeega ay u fidiyeen awgii.
Xubnaha qoysku waxay iska dhigeen inay yihiin diblomaasiyiin laakiin kuma hadlaan luqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska, taas oo shaki ku abuurtay booliska xuduudaha, kuwaas oo baaray dukumiintiyada safarka iyo aqoonsiga xubnaha qoyska, waxayna ogaadeen in wax waliba ay yihiin been abuur oo arrintu ay la xiriirto qaxootinimo.
Odayga reerka kuma guuleysan inuu qanciyo booliska garoonka, laakiin wiilkiisa yar oo 12 sano jir ah ayaa ugu dambeyn booliska u suurta galiyay inay ogaadaan in qoysku ka cararayo aabaha hooyadiisa. Dhanka kale, qoysku waxay qireen in aabaha xaaska uu noqday nin ku dhegen Diinta oo xagjir ah uu doonayo in la gudo gabadhiisa oo 44 jirka ah iyo gabadha uu awoowaha u yahay oo 7 jirka ah.
Markii ninka qaba gabdhiisa u hogaansami waayey codsiga odayga ee gudniinka, aabaha xaaska ayaa u hanjabay isaga iyo xaaskiisa, taasna waxay keentay inuu iibiyo gurigiisa, beertiisa iyo makhaayaddiisa oo ku taalay waqooyiga Ciraaq dhamaantoodna waxay u qaxeen dalka Turkiga, halkaas oo ay ku bixiyeen ilaa 60,000 euro garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul.
Qoyska reer Ciraaq waxaa loo wareejiyay mid ka mid ah xarumaha ugu horreeya ee lagu qaabilo qaxootiga ku nool gobolka Bavaria. Mas’uuliyiintu waxay bilaabeen baaritaano ka dhan ah kuwii fududeeyay howsha tahriibka ee garoonka diyaaradaha ee Munich.
Qoyska ayaa ka mid noqday qaxootiga ugu nasiibka badan ee sida raaxada leh ku yimid dalka Jarmalka, walow ay bixiyeen lacag badan.